Iinkqubo ezi-5 zekhamera ze-android ezinokudubula iifoto ezingasetyenziswanga
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iinkqubo ezi-5 zekhamera ye-Android ezinokuthi zithathe iifoto eziluhlaza
Nabani na oyaziyo indlela yakhe ejikeleze ikhamera kufuneka aqhelane neefayile zemifanekiso eluhlaza. Ukubeka ngokulula, ziqulathe idatha emsulwa, engacinezelwanga ebanjwe yikhamera kunye neapos; s isivamvo. Yiyo le datha esetyenziswa ngumfanekiso wekhamera kunye neapos; s ukuvelisa iiJPEGs esiza kuthi emva koko sijonge kwaye sizithumele kwi-intanethi. Olu luhlobo lwefayile oza kuyisebenzisa umfoti ukuba enze uninzi lwemifanekiso yabo.
Ke ukuba kunjalo, kutheni ungasenzi sonke imifanekiso yemifanekiso eluhlaza kunye nee-smartphones zethu endaweni yokulahleka kweJPEG? Ngenxa yokuba iifayile eziluhlaza zithatha indawo eninzi, kuba uninzi lweeapps alunakutolika idatha ebonakalayo eziqulethwe yiyo, kwaye ngenxa yokuba iiJPEGs zikhangeleka zilungile, phakathi kwezinye izizathu. Kodwa kwangaxeshanye, iinguqulelo zamva nje ze-Android zinobuchwephesha bokugcina imifanekiso eluhlaza, kwaye kukho iinombolo ezikhulayo zeefowuni ze-Android ezinento eyakhelweyo kwiinkqubo zekhamera. Ngokwendalo, inqaku lokugcina iifoto njengeefayile ze-DNG-ulwandiso oludumileyo lwemifanekiso eluhlaza-yeza kunye ne-Android 5.0 Lollipop kunye ne-Camera2 API yayo.
Ngelishwa, ayizizo zonke iifowuni ze-Android ezisebenzisa i-Lollipop nangaphezulu ezinee -apps zekhamera ezinamakhono amdaka. Kungenxa yoko le nto sasicinga ukuba & nathi siphume siphume sisebenzisa ii-apps zekhamera ye-Android ezikuvumela ukuba udubule imifanekiso eluhlaza. Ubuncinci kwezinye iifowuni, oko kukuthi-iifowuni ezine-Camera2 API ekhankanywe ngokupheleleyo. Masikhe siqale ngo ...
Akunzima ukuxelela ukuba le app yekhamera imalunga nantoni. Njengoko igama layo lisitsho, iKhamera yeManyuwali ijolise ekunikezeleni ukufikelela kulawulo lwekhamera epheleleyo. Kwizixhobo ezihambelanayo, wena kunye neapos zivunyelwe ukulawula ukugxila, ibhalansi emhlophe, isantya se-shutter, i-ISO, kunye nokuseta imbuyekezo yembuyekezo. Ngelixa usetyenziso lunokulawula nganye yezi paramitha ngokuzenzekelayo kuwe, ucofe kwindawo enye yokutshixa ixabiso layo, likuvumela ukuba uyitshintshe njengoko ubona kufanelekile. Ulawulo luhlelwe ecaleni, apho kulula & ukufikelela kuzo, kwaye ivili esikrinini yinto oyisebenzisayo ukwenza uhlengahlengiso olwenziweyo. Izinto eziyimfuneko njengexesha elizimeleyo, imigca yegridi ekwi-screen, kunye nolawulo lwefleshi nazo zikhona. Lilonke, usetyenziso lumelwe kukuzama kubo bonke abantu abathanda ukufota. Qiniseka ukuba uqhuba ujongano lokuhambelana ngaphambi kokuthenga usetyenziso. Izakubonisa ukuba yeyiphi na iapps, kubandakanya ukudubula kwiRAW, ezakuxhaswa kwisixhobo sakho.
Khuphela Ikhamera yesandla ($ 2.99)
Khuphela Ukuhambelana kweKhamera yemanuwali
Nantsi iapos enye inkqubo yeekhamera ezinesakhono RAW egxile kakhulu kulawulo olululo, olufana nolawulo lweDSLR. Kwakhona, wena kunye ne-apos; sikhululekile ukulawula ukugxila, ibhalansi emhlophe, isantya se-shutter, i-ISO, kunye nembuyekezo yokuvezwa. Ukongeza, kukho iindlela ezininzi eziluncedo onazo, kubandakanya neNkqubo kunye nesantya esiphambili- eyokuqala ikuvumela ukuba udubule kwi-ISO emiselweyo kwaye eyokugqibela ithathe iifoto ngesantya esisheshayo ngokukhawuleza, kunye nolunye useto lwekhamera luhlengahlengiswe ngokuzenzekelayo. Kwaye ufumana imowudi yokuqhekeka, isibali-xesha, isibhengezo sokubonisa, izikhokelo kunye ne-histogram. Ukwenza ukudubula kube lula ngakumbi, iapps ikuvumela ukuba utshintshe useto lwekhamera kwisixhobo sakho kunye nezitshixo zeevolumu zeapos, ezintle nezicocekileyo.
Khuphela Ikhamera FV-5 ($ 3.95)
Khuphela Ikhamera FV-5 I-Lite (ukhetho lwe-RAW alufumaneki)
Ngokujonga nje, ikhamera ye-AZ ibonakala ifana kakhulu neeapps ezimbini ezidlulileyo. Kwaye -Nekhamera ye-AZ, unolawulo olululo kwimisebenzi yekhamera kunye neapos; Yintoni eyenza iapp ihluke kukuba iza simahla. Ngokuqinisekileyo, ezinye izinto zibiza imali ukuvulwa, kodwa ukhetho lweRAW luyafumaneka kwangoko. Ukunikela ngemali kubaphuhlisi kuya kukunika ukufikelela kwirekhodi yevidiyo engenamda (kunye nolawulo lwencwadi), ukubekwa kubakaki, i-histogram ephilayo kunye nokunye.
Khuphela Ikhamera yeAZ (Kusimahla, kodwa amanqaku ePro aya kukuhlawula)
Okokuqala, iindaba ezimnandi: Ikhamera eNgcono ineendlela ezininzi kunye noseto lokukunceda uthathe iifoto ezingcono. Okwangoku, ingxelo yayo epheleleyo iyathengiswa. Ngokubhekisele kwiindaba ezingalunganga kangako, i-RAW ixhaswa kuphela kwinani eliqingqiweyo lezixhobo, ke yenza ezi zinto zilapha ngasentla zizame ukuba inkxaso yeRAW yile nto uyifunayo. Iifoto zeRAW ecaleni, Ikhamera eyiNgcono inikezela ngeempawu ezimbalwa eziluncedo, kubandakanya i-Pre-shot, i-HDR +, indlela yobusuku, iipanorama eziphezulu, ukususwa kwento, nokunye okuninzi.
Khuphela Ikhamera engcono ivuliwe ($ 3.99)
Khuphela Ikhamera engcono (Uhlobo lwasimahla)
Kwaye okokugqibela, le yikhamera ye-Mi2raw. Ithatha iifoto zeRAW, ngokucacileyo, kodwa isebenza kuphela kwii-smartphones. Oku kubandakanya iXiaomi Mi2, Mi3, LG G2, kunye ne-OnePlus One. Ukuba ifowuni yakho ayixhaswanga, i-app ayizukuqala. Sukuzikhathaza ngokukufaka xa kunjalo.
Khuphela Ikhamera ye-Mi2raw (Simahla)
lg cofa kabini ukuvuka
Eyona ncwadi ifanelekileyo yeselenium webdriver
I-JBL Ikhonkco 10, 20, 300 Ukuphononongwa kwezithethi ezikrelekrele
I-T-Mobile iqala ukukhupha i-Android 7.0 Nougat ye-LG V10
I-Apple kunye neapos; i-mini mini ye-iPad iyathengiswa ngexabiso elihle ngoLwesihlanu omnyama ngoku